Riinka Dumarka ee Xilliga Galmada Maxaa Sababa? | shumis.net
Home » galmada » Riinka Dumarka ee Xilliga Galmada Maxaa Sababa?
Ragga ayaa la ogaaday in ay raaxo wali ah ka helaan codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ay sameeyaan dumarka Xiliga loo diyaar garoobayo galamada oo ay socato baashida ama istiminta. Dumarka intooda badan ayaa aaminsan in ay ceeyb tahay haddii ninkeedu uu maqlo iyadoo sameeneyso codka hoose ee loo yaqaan riinka kaasoo ka dhasha Macaansiga baashida ama galmada ,balse ay ragu ay ka helaan dareen xoogan oo dhaliya in uu kordho jaceylka uu qaadayo Lamaanihiisa.
Dumarka arrinkan aamisan ayaa intooda badan isku celiya naqaska isna caburiya xiliga ay socato baashida ama galamada kana been sheega dareenkooda nafeed ,iyagoo dareemamaya raaxo aad u macaan oo ay ku nafiseyaan oo kaliya in ay sameeyaan codka hoose ee riinka,balse aynu u sameyn karin Xoshood jira dartiisa. Marka laga fiiriyo dhanka Caafimaadka uma wanaagsana in ay dareenka isku celiyaan waayo arrinkaas cuduro ayaa laga qada dhinaca galmada ah oo waxaa xanibaad galaya dareenwadayaasha xiligaas u diyaarka ah Macaansiga falgalka labada xubnood marka ay is taabtaan.
Title: Riinka Dumarka ee Xilliga Galmada Maxaa Sababa?